Incwadi eya kumngani ebuthweni: Nikeza iholide kancane
Ngeke ukuqagela ukuthi inkonzo yezempi ephoqelelwe edingekayo. Kusengenzeka khona njengoba elinikeziwe. Abafowethu, abathandekayo nabangane lihamba kude nathi isikhashana bese ebuyela kwabanye abantu. Ngisho guys ezimele kakhulu futhi oqinile ibutho sina. umndeni Ukusekela kubalulekile kunoma eliselincane nayo yonke incwadi ebuthweni - iholide. Indlela ukubhala incwadi impi ukuba abe umngane wakho?
Wezempi, kuze kube yilolo imeyili ezimweni eziningi kungaphumeleli, ngakho kufanele athumele incwadi ejwayelekile. Uma ufuna isikhathi incwadi yami ngosuku oluthile ezinye ekuphileni, isikhathi count ilungile, ukuthi incwadi isifikile ngesikhathi. Maduzane asifunda kulokho okwenzeka, kangakanani umlayezo wakho impi. Umngane uyojabula kakhulu ukuthi oyikhumbulayo ngayo. Ngisho incwadi encane lilondolozwe ngokucophelela futhi kabusha ufunde, ngoba umngane wakho unxanela ekhaya kanye nabathandekayo.
Wena at ukulahlekelwa futhi awukwazi ukucabanga ngalokho ukubhala ngayo? Ungakhathazeki, lena akuyona incwadi eya kumngani ngeposi, umazi lo muntu uqobo, futhi nginezinkumbulo eziningi wabe. Kwakuwusuku inkumbulo yezinto ayezibone nabantu othandekayo kakhulu. Ikakhulukazi uma ukhumbula izenzakalo ezinhle. Life yezempi - kanzima ukuphila kwansuku zonke futhi uma ungakwazi ukusiza umuntu ukukhumbula ezinhle, kuyokusiza ukuba uthole ahlangahlangene futhi uzizwe kangcono. Kwakukhona izimo lapho izinhlamvu ezinhle futhi ijulile wasindisa ukuphila amasosha abasha ekhaya. Kodwa uqaphele, ungabhali lutho siqu kakhulu, ngoba umngane ibutho ungafunda ongamazi. Ngakho qaphela, sebenzisa Amacebo uma ungaqiniseki ukuthi ukubhala mayelana lokhu noma lokhuya.
Enye into enhle ukubhala mayelana nezinye, ukuthi wenze abangane. Bhala ukuthi yini ngempela ngimkhumbula nezimfanelo zakhe ezikhethekile. Sitshele mayelana izindaba zakho, ngisho noma amancane engenangqondo. Yabelana izindaba mayelana abangane mutual, mhlawumbe othile kokutjhada kwami, umuntu uye Wathola umsebenzi omusha, othile ukhulelwe. Yiqiniso, cishe ukuziphatha okubi Man Woman ibutho akufanele ukubhala, ake ithoni incwadi uzokhombisa ukuthi unalo igciwane.
Faka amahlaya imeyili futhi ezilula kakhulu le ndaba, noma ngabe lolo hlamvu kuyoba mnandi futhi ulwazi. Enye into okuhle ukuze afake incwadi eya kumngani ebuthweni zibona yakhe yokuphila, kwenza i siqu ngokukhethekile. Uma nobabili amakholwa, ungabhala kuye ngoNkulunkulu ozenzile entsha esontweni eduze sentshumayelo yokugcina ngeSonto. Ngisho noma umngane wakho engakholwayo, yena waba yisosha, kungenzeka ukuba asondelane noNkulunkulu, kwenzeka kwabaningi. Ngakho umbhangqwana amazwi kaNkulunkulu kuyoba close kakhulu kuwowonke amazwe, kodwa abangakholelwa kuNkulunkulu banesithakazelo sobala.
Kuhle ukudala ezinye image omuhle ngekusasa. Cabanga ukuthi yini ongayenza ndawonye uma efika ekhaya. Mhlawumbe wena ngifuna ukuya abazingela ndawonye noma itulo ibhizinisi ufuna ukuthatha umlingani wakhe, ngoba kungcono akazi ubani? Bhala umngane ngalokhu, kuyoba umvumele kulula ukukhuthazelela ubunzima yempi. Menze azi ukuthi ulinde eziningi izenzakalo ezithakazelisayo futhi ezimibalabala ukuthi uzovele ndawonye.
Uma lena incwadi yakho yokuqala eya kumqondisi wempi umngani omkhulu, cha enza it isikhathi eside kakhulu. Buza imibuzo ngempilo kanye nemizwelo, bacele ukuba akuthumelele amahlaya lempi funny "isandla kuqala". Ungabuzi mayelana nokuphathwa kanye netimo tekusebenta, ukuze singathwesi eziveza omunye. Futhi ungalindeli impendulo ngokushesha okukhulu, ibutho akusho ngaso sonke isikhathi nethuba isinyathelo ngokushesha.
Babhalele izingane ibutho - nobuhlobo bakho ngokuqina futhi babe ngempela proverennymi.Chelovek zivela ibutho ehluke ngokuphelele, kodwa ubuhlobo bakho naye kuyoba ngcono kakhulu, ngoba kuyoba Lowo ongazange akhohlwe esimweni esinzima. Futhi njengoba ebuthweni - cabanga ukuthi ihlombe yayo nangokwenama okukhulu. Nikeza iqembu ngalinye nge imvilophi elula ngohlamvu. Akukho Iyisipho nokuma kwesosha lingasuki.
Amazwi amahle intombi noma intombi, isipele ngezenzo, angenza izimanga.
Impendulo: "Ngiyakuthanda", noma ukuqashelwa okungazelelwe
Bhala ukuthi umfana ukuthi yayijabulela nge-SMS noma i-imeyili?
Kanjani ukuze sicele intethelelo evela intombi yakhe
Ipaki "Ubungane" (Rostov-on-Don) - oasis green emzini
Indlela ukuhlela ukuzalwa intombazane noma umfana
Tattoo kwabesifazane: ehlombe olubheka kangcono?
Kanjani ukuheha ngemali endlini? Izindlela eside lukhona
Ukubhalisa isimo party eRussia. Imibhalo sokubhalisa inhlangano yezepolitiki
Microcomputer ugandaganda KamAz-6350: tesakhiwo, Ukucaciswa
Bangaki abalingiswa kule sesiShayina? Inombolo iyahlukahluka kuye ngokuthi isimo
Boiler indlu: indlela yokwenza izinqumo ezinhle?
Amakhambi: uhlu isici